ဘုရားသခင်၏ပထမလူ (သင်ခန်းစာ - ၁) God’s First Man Lesson1
အဓိကကျမ်းပုဒ် ။ ။ ရောမ ၅း၁၂
ဖတ်ရန်ကျမ်းစာ ။ ။ ကမ္ဘာ ၁၊ ၂ ၊ ၃
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် လူသားသည် အပြစ်ကြောင့် လုံးဝပျက်စီးလျက်ရှိပုံနှင့် ဘုရားသခင်၏ ကြီးစွာသော ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းကို ပြောပြထားသည်။ တောက်ပထွန်းလက်၍ အနာအဆာမရှိသော စိန်ကို အမဲရောင် နောက်ခံ ဖြင့် ပြသထားခြင်းသည် အကောင်း ဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ကြီးစွာသော ကယ်တင်ခြင်းသည် လူသား၏အပြစ်နှင့် ပုန်ကန်မှုကြောင့် မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သော နောက်ခံ သမိုင်းမှ ပေါ်ထွန်း တောက် ပလာခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၏ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကို တစ်ခုတည်းသော ကြီးမြတ်သော စာကြောင်းဖြင့် ဖော်ပြ ထားသည်။ ““အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။”” (ကမ္ဘာ ၁း၁)
ဘုရားသခင်သည် သူ၏အကြီးမြတ်ဆုံးသော ဖန်ဆင်ခြင်းဖြစ်လာမည့် လူသားကို ဖန်ဆင်းရန် ပြင်ဆင်သည် အနေဖြင့် အပင်၊ ငါးများ၊ ငှက်များနှင့် တိရစ္ဆာန်အားလုံးတို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (ဤသင် ခန်းစာများတွင် ““လူသား”” ဆိုသော စကားလုံးသည် လူသားမျိုးနွယ် တစ်ခုလုံးကို ညွှန်းဆိုဖော်ပြလျက် သုံးစွဲ ထားသည်။
လူသားသည် နိမ့်ကျသောဘ၀တစ်ခုခုမှ ဖြစ်တည်လာခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် သူ့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့ သည်။ ကျမ်းစာက ““ထို့နောက် ထာဝရအရှင် ဘုရားသခင်သည် မြေမှုန့်ဖြင့်လူကို ဖန်ဆင်း၍ သူ၏နှာခေါင်းထဲသို့ ဇီဝအသက် ကို မှုတ်တော်မူလျှင် လူသည် အသက်ရှင်သော သတ္တ၀ါ ဖြစ်လေ၏။”” ကမ္ဘာ ၂း၇
လူသားသည် အသက်ရှင်သော သတ္တ၀ါအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်ခြင်းကိုခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ တစ်ယောက်ကို တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဟူ၍ မခေါ်ပါ။ လူသားသည် အသက်ရှင်သော သတ္တ၀ါ ဖြစ်ရုံမက သူ၌ ဘုရားသခင် သူ့ထဲသို့ မှုတ်သွင်းထားသော ၀ိညာဉ်တစ်ခုလည်း ရှိသည်။ သူ၏၀ိညာဉ်အားဖြင့် လူသားသည် ဘုရားသခင်ကို သိရှိနိုင်ပြီး အသက်ကို ရရှိနိုင်သည်။
လူသားသည် ဖန်ဆင်ခြင်းခံရသော သတ္တ၀ါဖြစ်သည်။ လူသားသည် ဘုရားမဟုတ်သလို ဘုရား၏အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်းဆင်ခြင်းခံရသောသတ္တ၀ါများတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်ခြင်း ခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက “ထိုသို့ ဘုရားသခင်သည် မိမိပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ လူကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မိမိပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့် အညီ လူ၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမကို ဖန်ဆင်းပြီးလျင်၊ ....”ဟု ဆိုသည်။ ကမ္ဘာ ၁း၂၇
ဘုရားသခင်သည် လူသားကို ကမ္ဘာမြေကြီးအား အစိုးရခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်မှာ သူ ဖန်ဆင်းထားသော အရာများအားလုံးအတွက် ဘုန်းရှိသော ဦးခေါင်းတစ်ခုကို ထားရှိရန် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုအတွက် အရာ အားလုံးကို အုပ်စိုးနိုင်သော လူတစ်ဦးကို လိုချင်ခဲ့သည်။
အာဒံနှင့်ဧ၀ကို ဖန်ဆင်းပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ သူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံး ဘုရားသခင်လုပ်သောအရာမှာ ထိုအရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ““များပြားစွာမွေးဘွား၍ မြေကြီးကို ပြည့်စေကြလော့””ဟူ၍ သူတို့အား ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်တူညီ၍ သူကဲ့သို့ ကိုယ်ကျင့်တရားဖြင့် ပြည့်စုံသော လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကို လိုချင်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် ဘာကြောင့် လူသားကို ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း? သူ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုရရှိရန် ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး သူ၏ ဖန်ဆင်းခြင်း လက်ရာများအားဖြင့် သူသည် ၀မ်းမြောက်သည်။ ကျမ်းစာက ““ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် နိစ္စ အမြဲ တည်၏။ ထာဝရဘုရားသည် မိမိ အမှုတော်တို့တွင် ၀မ်းမြောက်တော် မူ၏။”” ဆာလံ ၁၀၄း၃၁
ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်း၍ ပြီးစီးသောအခါ သူဖန်ဆင်းခဲ့သောအရာတို့ကို ကြည့်၍ ၀မ်းမြောက်တော်မူသည်။ ကျမ်းစာက ““ဘုရားသခင်သည် မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကို ကြည့်ရှုလျှင်၊ အလွန် ကောင်းသည်ကို မြင်တော်မူ၍”” ဟုဆိုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ ၁း၃၁
ကျမ်းစာထဲရှိ ကမ္ဘာဦးကျမ်း အခန်းကြီး(၃)သည် အရေးအကြီးဆုံး အခန်းကြီးများထဲတွင် တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ ဤအခန်းကြီး (၃)တွင် အပြစ် ဤလောကအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာပုံ၊ အပြစ်၏သဘော၊ အပြစ်၏အရင်းအမြစ် နှင့် အပြစ်၏ဆိုးရွားသော အကျိုးဆက်များ အကြောင်း ရေးသား တင်ပြထားသည်။
ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧ၀ကို စားသောက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများနှင့် ပြည့်လျက်ရှိသော လှပသော ဥယျာဉ်အတွင်း၌ နေရာ ချခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဒံနှင့်ဧ၀အပေါ် တားမြစ်ချက်တစ်ခုသာ ထားရှိခဲ့သည်။ ““ကောင်းမကောင်းကို သိစေသောအပင်”” မှ အသီးကို မစားရန် တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်အတန်ကြာ အာဒံနှင့်ဧ၀သည် အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကို ပျော်ရွှင်စေမည့် အရာ အားလုံး သူတို့တွင်ရှိခဲ့သည်။ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးအရာမှာ သူတို့သည် ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခွင့် ရခဲ့ကြသည်။ ဤမိတ်သဟာယသည် သူတို့ကို အကြီးအကျယ် ၀မ်းမြောက်စေခဲ့သည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူ၏ရန်သူတော်ကြီး စာတန်ကို အာဒံနှင့်ဧ၀အား သွေးဆောင်ရန် အခွင့်ပေးခဲ့သည်။ ဧ၀သည် စာတန်၏ လှည့်ဖြားခြင်းကိုခံရပြီး တားမြစ်ထားသောအသီးကို စားမိခဲ့သည်။ အာဒံမှာ သွေးဆောင်ခြင်း မခံရ သော်လည်း အသီးကိုစားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို မနာခံရန် သူရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤပထမလူ၏ ဆိုးရွားသော ပုန်ကန်မှုနှင့် မနာခံမှုသည် အပြစ်နှင့်သေခြင်းကို ဘုရားသခင်၏လှပသော ကမ္ဘာအတွင်းသို့ ယူဆောင်လာ ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက ““အပြစ်တရားသည် တယောက်သောသူ အားဖြင့် ဤလောက သို့ဝင်၍ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရား ၀င်သည်နှင့်အညီ၊....”” ဟုဆိုခဲ့သည်။ ရောမ ၅း၁၂
အပြစ်သည် ဤလောကအတွင်းသို့ မည်သို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့သနည်း? တယောက်သောသူ အာဒံ၏နာမခံခြင်း အားဖြင့် ၀င်ရောက်လာသည်။ အပြစ်၏သဘောသဘာဝမှာ အဘယ်နည်း? ဘုရားသခင်နှင့် သူ့အလိုတော်ကို ပုန်ကန်ခြင်း မှာ အပြစ်၏သဘောသဘာဝ ဖြစ်သည်။ မည်သည့် အရင်းအမြစ်မှ အပြစ်ဝင် ရောက်လာသနည်း? အာဒံသည် မနာခံခြင်း အားဖြင့် အပြစ်နှင့်သေခြင်းကို ဤလောက အတွင်းသို့ ယူဆောင် လာခဲ့ပြီး လူသားကို အပြစ်တန်ခိုး၏ ချုပ်ကိုင် ခြယ်လှယ်မှု အောက်သို့ ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။
အာဒံသည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့သောအခါ သူသည် ၀ိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးသွားသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏အသက်တာနှင့် ကင်းကွာခဲ့ပြီး သူ၏ဇာတိသဘောသည် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ အာဒံသည် လူသား မိသားစု၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သောကြောင့် သူ၏အပြစ်သားဇာတိ ကို သူ့သားသမီးများနှင့် လူသားမိသားစုတစ်ခုလုံးထံ လက်ဆင့်ကမ်းပေးဝေခဲ့သည်။
အာဒံကို ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခဲ့သော်လည်း အာဒံမွေးဖွားခဲ့သော သားသမီးများမှာမူ သူပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တညီ တဏ္ဍာန် တည်းဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာ ၅း၃) အာဒံသည် သူကဲ့သို့ အပြစ်သားဇာတိ လူသားမျိုးနွယ်ကို ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် အာဒံ၌ နောက်ထပ် ၀မ်းမမြောက်တော့ပါ။
အာဒံအပြစ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် သူ၌ဘုရားသခင်၏ ၀မ်းမြောက်ခြင်းသည် အဆုံးသတ် သွားသည်။ ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်၏ ပထမလူသည် အပြစ်သားဖြစ်သွားသည်။ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းရှိခဲ့ရာမှ မကောင်းသောအရာ အလုံးစုံကို လုပ်စေမည့် ပိုးမွှားများသည် အာဒံ၏နှလုံးသား အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး သူသည် သူ၏အပြစ်သားဇာတိကို သူ၏သားသမီးများနှင့် လူသားမျိုးနွယ် တစ်ခုလုံးထံသို့ လက်ဆင့်ကမ်း ပေးဝေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သမိုင်းစာမျက်နှာရှိ အချိန်ကာလမျိုးစုံတွင် အသက်ရှင်ခဲ့ကြသော အာဒံ၏သား သမီးများ အကြောင်း နှင့် သူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင်၏တွက်ချက်ထားခြင်းကို ကြည့်ကြမည်ဖြစ်သည်။
သဘာဝအားဖြင့် အာဒံ၏သားသမီးများသည် မည်သို့ ပုံစံဖြစ်သနည်း ဆိုတာကို တွေးတောဆင်ခြင် ကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သိမှတ် ထားရမည့် အချက်မှာ ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးတွင် အချို့သောလူတို့၌ ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော်၏ လုပ်ဆောင်မှုသည် ထင်ဟပ်လျက် ရှိသည်။ ခေတ်ကာလတိုင်း၌ ဘုရားသခင် ကို ယုံကြည်ခြင်းအရာ၌ ထင်ရှားသူ၊ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများရှိခဲ့သည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး(၆)တွင် အာဒံသေဆုံးပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ ခန့်အကြာတွင် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ အခြေ အနေ တို့က မည်သို့ မည်ပုံ ဖြစ်သည်ကို ပြောပြထားသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် လူအများအပြား နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ထိုအချိန်တွင် လူများ၏အကျင့်စရိုက်မှာ မည်သို့နည်း။ လူတို့သည် အလွန်ကောက်ကျစ်လျက်ရှိသည်ဟူ၍ ကျမ်းစာက ပြောထားသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်က ““မြေကြီးပေါ်မှာ လူအပြစ်ကြီး၍၊ သူ၏စိတ်နှလုံး အကြံ အစည် ရှိသမျှတို့သည် အစဉ်မပြတ် ဆိုးညစ်ခြင်း သက်သက် ရှိကြောင်းကို ဘုရားသခင် သိမြင်တော်မူလျှင်”” ဟူ၍ ဆိုထားသည်။ ကမ္ဘာ ၆း၅
ထိုအချိန်ကာလရှိ လူများသည် အလွန်ဆိုးညစ် ကောက်ကျစ်သဖြင့် သူတို့၏အကြံအစည်ရှိသမျှသည် အစဉ် မပြတ် ဆိုးညစ်လျက် ရှိသည်ဟူ၍ ဘုရားသခင်က ပြောသည်။ ကျမ်းစာက ““မြေကြီးပေါ်မှာ လူကိုဖန်ဆင်းသည်ကို နောင်တရ၍ နှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူ၏”” ဟူ၍ဆိုထားသည်။ ကမ္ဘာ ၆း၆
လူတို့သည် အလွန်ကောက်ကျစ်သဖြင့် ဘုရားသခင်သည် နောဧနှင့် သူ့မိသားစုမှလွဲ၍ လူသားတိုင်းကို ဖျက်ဆီး ပျောက်ကွယ် စေခဲ့သော ရေလွှမ်းမှု့ကြီးကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ လူ(၈)ဦးသာ ဤကြီးစွာသော ရေလွှမ်းမိုးမှု့ကြီးမှ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထို(၈)ဦးမှာ နောဧနှင့်သူ့မိန်းမ၊ သူတို့၏ သား(၃)ယောက်နှင့် ချွေးမ သုံးယောက်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကြီးစွာသော ရေလွှမ်းမိုးမှု့ကြီးပြီးနောက် နောဧ၏မိသားစုသည် သားသမီးများမွေးဖွား၍ တိုးပွား လျက်ရှိသည်။ ထပ်မံ၍ အာဒံ၏သားသမီးများသည် မြေကြီးတပြင်လုံးကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ကို ကျောခိုင်းသဖြင့် သူတို့၏ အပြစ်များ၊ ကောက်ကျစ်မှု့များအားဖြင့် ကမ္ဘာ မြေကြီးအား အကျဉ်းတန်စေခဲ့ သည်။
ဘုရားသခင်သည် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံ၍ တစ်ခုသောမိသားစုကို သူ့နောက်တော် လိုက်စေခဲ့သည်။ ဣသရေလသား သမီးများ တည်းဟူသော သူ၏လူမျိုးတော်ဖြစ်လာမည့် မိသားစုဝင်၏ ဦးစီးခေါင်း ဆောင်အဖြစ် အာဗြံဟံ ကို ဘုရားသခင်သည် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ဣသရေလအမျိုးသားများသည် အီဂျစ်ပြည်တွင် ကျွန်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား အီဂျစ်ပြည်မှ ခေါ်ထုတ် လမ်းပြမည့်သူ မောရှေကို သူတို့အားပေးအပ်ခဲ့သည်။
သိနတောင်တွင် ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တော်(၁၀)ပါးကို မောရှေအားပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့် အမြင်၌ ဘယ်အရာက မှန်သည်၊ မှားသည်ကို ဤပညတ်တော်များက ပြောပြထားသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်ကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းသော ဒါဝိတ်၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဣသရေလပြည်သည် ကြီးမား၍ အင်အား တောင့်တင်းသောနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။ ရေလွှမ်းမှုကြီးပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၁၃၀၀ ခန့်အကြာတွင် ဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုလူများသည် ဘုရားသခင်၏ နှလုံးသားထံတော်သို့ နှစ်သက်ကျေနပ်မှုဝမ်းမြောက်မှုကို ယူဆောင်ခဲ့သလော?။ မယူဆောင်ခဲ့ပါ။ ကျမ်းစာက ““နားလည်သောသူ၊ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူ တစုံ တယောက်ရှိသည်၊ မရှိသည်ကို သိမြင်ခြင်းငှာ၊ ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းကင်ပေါ်က လူသားတို့ကို ငုံကြည့်တော်မူ၏။ လူအပေါင်းတို့သည် လမ်းလွဲ ကြပြီ။ တညီတညွတ်ဆွေးမြေ့ယိုယွင်ခြင်းရှိကြ၏။ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်သောသူမရှိ၊ တယောက်မျှမရှိ။”” ဟူ၍ ပြောထားသည်။ ဆာလံ၁၄း၂-၃
ဒါဝိတ်ကဲ့သို့သော ဘုရင်ကောင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသော ပညတ်တော်များ ပေးခဲ့တာ တောင်မှ လူများ၏ နှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်များ ခိုအောင်းလျက် ရှိဆဲပင်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီးနောက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ ကြွရောက် လာ ခဲ့သော အချိန်ကာလသည် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် အာဒံ၏သားသမီးများသည် အရင်ကထက် အကျင့် စာရိတ္တ ကောင်းလာခဲ့ပြီလော။ မကောင်းလာပါ။ သခင်ယေရှုသည် သူတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ရှိသောအရာကို သိခဲ့သည်။ အာဒံ၏သားသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ သခင်က ဤသို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ““လူ အတွင်းမှ ထွက်သော အရာ မူကား၊ လူကို ညစ်ညူးစေသောအရာရှိ၏။ လူအတွင်းနှလုံးထဲက မကောင်းသော ကြံစည်ခြင်း၊ သူ့မယးကိုပြစ်မှားခြင်း၊ မိန်းမလွတ်နှင့် မှားယွင်းခြင်း၊ လူ့အသက်ကိုသတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာကို ခိုးခြင်း၊ လောဘလွန်ကျူးခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ လှည့်စားခြင်း၊ ညစ်ညူခြင်း၊ ငြူစုခြင်း၊ သူ့အသရေကိုဖျက် ခြင်း၊ ထောင်လွှာစော်ကားခြင်း၊ လျှပ်ပေါ်ခြင်း၊ ဤဆိုးညစ်သော အရာများတို့သည် အတွင်းမှ ထွက်လာ၍ လူကိုညစ်ညူးစေကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”” (မာကု ၇း၂၁-၂၃)
ခရစ်တော်ကြွလာပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်ကြာပြီးနောက် အာဒံ၏သားသမီးများသည် အရင်ကထက် ပိုမို ကောင်း လာ ပါသလား။ မကောင်း လာပါ။ သဘာဝအားဖြင့် အာဒံ၏သားသမီးများသည် အပြစ်သားများသာဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““ ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ၊ တယောက်မှမရှိ။ နားလည် သောသူမရှိ၊ ဘုရားသခင်ကိုရှာသောသူမရှိ လူအပေါင်း တို့ သည် လမ်းလွဲ၍ တညီတညွတ်တည်း အသုံးမရသော သူဖြစ် ကြပြီး။ ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်သောသူမရှိ၊ တယောက်မှ မရှိ”” ဟုဆိုခဲ့သည်။ ရော ၃း၁၀-၁၂
ကျမ်းစာက အာဒံ၏သားသမီးများသည် အပြစ်လုပ်ပုံခြင်းတူညီသည်ဟု မပြောထားပဲ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် အပြစ်၏အောက်တွင် ရှိနေခြင်းကိုမူ အသေအချာပြောထားသည်။
သခင်ယေရှုက သူသည် ကြီးမားသော ဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ဤလောကသို့ ပြန်မကြွလာမီ နောက်ဆုံးသော နေ့ရက်များ၌ ဤလောကရှိ အခြေအနေတို့က မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ပြောပြထားသည်။ ထို အချိန်တွင် အခြေအနေတို့က ကောင်းလာမည်လော့? မကောင်း လာပါ။ ပို၍ ဆိုးလာမည် ဖြစ်သည်။
ယေရှုက ““နောက်လာမည့်နေ့ရက်တို့၌ အပြစ်တို့သည် ပို၍ပင် များပြားလာမည်””ဟူ၍ ပြောထားသည်။ သခင်က ““နောဧ လက်ထက်၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ လူသားလက်ထက်၌ ဖြစ်လိမ့်မည်။””ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ (လုကာ ၁၇း၂၆)
သူပြန်ကြွလာသောအချိန်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြေအနေတို့သည် နောဧခေတ်ကာလ၌ ဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည် ဟု သခင်ယေရှုက ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ နောဧအချိန်ကာလ၌ အခြေအနေတို့က မည်သို့ ဖြစ်ခဲ့သနည်း? ““မြေကြီးပေါ်မှာ လူအပြစ်ကြီး၍၊ သူ၏စိတ်နှလုံး အကြံအစည် ရှိသမျှတို့သည် အစဉ်မပြတ် ဆိုးညစ်ခြင်းသက်သက်ရှိကြောင်း .....””
သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးရှိ ခေတ်ကာလအသီးသီးတို့၌ အာဒံ၏သားသမီးများအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့ပြီး ဖြစ် သည်။ အာဒံမိသားစု ၏ ရာဇ၀င်တစ်ခုလုံးကို ဤစကားလုံးတစ်ခုတည်းဖြင့် အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြနိုင် သည်။ -- အပြစ် (SIN)
ဘုရားသခင် ကတိထားတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်
အာဒံကို မဖန်ဆင်းမီကပင် အာဒံနှင့်သူ့သားသမီးများသည် အပြစ်လုပ်၍ ကျဆုံးမည်ကို ဘုရားသခင်သည် သိခဲ့ သည်။ သို့သော် ထာဝရကာလ၌ပင် ဘုရားသခင်၌ အကြံအစည်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သူသည် နောက်လူတစ်ဦးဖြစ်သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား လူသား မျိုးနွယ်ကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဖတ်သောအခါ လူသားမျိုးနွယ်ကျဆုံးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင် ကတိ ပေးထားသော ကောင်းချီး မင်္ဂလာတိုင်းသည် ကြွလာမည့် ကယ်တင်ရှင်တစ်ဦးဦးနှင့် ပတ်သက်ဆက်စပ် နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဘုရားသခင် ကြီးစွာသော ရွေးနှုတ်ခြင်း အစီအစဉ်သည် အာဗြဟံတည်းဟူသော တယောက်သောသူ အားဖြင့် စတင်သည်။ ဘုရားသခင်က အာဗြဟံကို ဤသို့ပြောခဲ့သည်။ ““သင်၏ပြည်နှင့်တကွ၊ အမျိုးသား ချင်းပေါင်းဘော်များထဲ က ထွက်ပြီးလျှင်၊ ငါပြလတံ္တ့သော ပြည်သို့သွားလော့။ ....သင့်ကိုကောင်းချီးပေးသော သူကို ငါကောင်းချီးပေးမည်။ သင့် ကို ကျိန်ဆဲသောသူကို ငါကျိန်ဆဲမည်။ သင့်အားဖြင့်လည်း လူမျိုး အပေါင်းတို့သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့် မည်။”” (ကမ္ဘာ ၁၂း၁၊၃)
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၂၂း၁၈ တွင် ဘုရားသခင်က အာဗြဟံကို ဤသို့ ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ ““သင်၏ အမျိုးအနွယ် (လူသားတစ်ဦးဖြစ်သော ခရစ်တော်)အားဖြင့် လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်။””
ဤကောင်းစွာသော ကတိတော်ကို အာဗြဟံအားပေးခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏နှလုံးသားကို ဖော်ထုတ် ပြသခဲ့သည်။ သူ၏ကြီးစွာသော ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူများကို ကောင်းချီးပေးရန်ဖြစ်သည်။ လူသားများသည် အပြစ်သားများဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သူ၏အပြစ်သား သတ္တ၀ါများကိုချစ်ပြီး ကောင်းချီးပေးရန် လိုလားသည်။
ဘုရားသခင်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော်သည် လူသားမျိုးနွယ်ထံသို့ အာဒံနှင့်သူ့မိသားစုမှတဆင့် ရောက်ရှိခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင် ကတိထားတော်မူသော ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော်အားဖြင့် ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ဤကတိထားခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ယူဆောင် လာမည် ဖြစ် သည်။ သူသည် တပါးအမျိုးသား (ဂျူးမဟုတ်သော)များအတွက် အလင်းဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ အနှံ့အပြားရှိ လူများ အတွက်လည်း ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““.....အာဏာတော် တိုးတက်တော်မူ ခြင်းနှင့် ငြိမ်းသက်တော်မူခြင်း သည် နိစ္စအမြဲရှိလိမ့်မည်””။ ဟေရှာယ ၉း၇
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြေက်မှုအတွက် လူကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပထမလူ အာဒံနှင့် သူ၏မိသားစုသည် ဘုရားသခင်ကို ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှု မပေးခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသော ကယ်တင်ရှင်ကို စေလွှတ်မည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ သူ့အားဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ အပြားရှိ လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ကောင်းချီး မင်္ဂလာကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ““သမ္မာတရား (TRUTH) ဘုရားသခင်”” ဖြစ်သည်။ (ဟေရှာ ၆၅း၁၆) သူသည် သမ္မာတရား (TRUTH) ကို ကျွန်ုပ်တို့အား သိစေလိုသည်။ လူများကို လွတ်လပ်စေသောတန်ခိုးသည် ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရား၌ ရှိ သည်။ ယေရှုက “သမ္မာတရားကိုလည်း သိကြသဖြင့် ထိုတရားသည် သင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့်မည်”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာတရား၊ ခရစ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာတရား၊ စာတန်နှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မာတရား၊ အပြစ်နှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာတရားနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မာတရားစသည် သမ္မာတရားတို့ကို သိနိုင်ရန် အတွက် ဘုရားသခင်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးခဲ့သည်။
ခပ်သိမ်းသောအရာတို့၏ မူလအစဖြစ်တည်မှုများအကြောင်းကိုလည်း သမ္မာကျမ်းစာက ပြောပြထားသည်။ စကြာဝဠာ၏အစ၊ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အစနှင့် လူသားမျိုးနွယ်၏အစ စသည်တို့အကြောင်းကို ပြောပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
လူတို့သည် ဘုရားသခင်ပြောပြထားသောအရာတို့ကို ပစ်ပယ်၍ မိမိတို့စိတ်ကူး အတွေးအခေါ်များ အတိုင်း စကြာဝဠာ၏အစကို မပြီးဆုံးနိုင်အောင် တွက်ချက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ရိုးရှင်းစွာ ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““လောကဓာတ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်အားဖြင့်သာ တည်သည်ကို ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သိကြ၏။”” ဟုဆိုသည်။ ဟေဗြဲ ၁၁း၃
ဘုရားသခင်က ပြောခဲ့သည့်အတွက် အမှန်ပင်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ပထ၀ီပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် သိပ္ပံပိုင်းဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်များသည် ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော်၏ သမ္မာတရားကို လှုပ်ခါစေ နိုင်သည်ဟူ၍ မည်သည့်ယုံကြည်သူကမှ မစိုးရိမ်သင့်ပါ။
လူသား၏မူလအစနှင့်ပတ်သက်၍ အမှန်တရားကို ကျမ်းစာက ပြောပြထားသည်။ ထပ်မံ၍ လူတို့သည် ဘုရားကို ပစ်ပယ်ပြီး မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင် သီအိုရီများဖြင့် လူသား၏အစကို ရှင်းပြရန်ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မောပန်းစေကြသည်။ ကျမ်းစာက လူသားသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်ခြင်းကိုခံရသည်ဟု ပြောထားသည်။ ဘုရားဖန်ဆင်းခဲ့သော သဘာဝ တရားထဲတွင် လူခန္ဓာကိုယ်သည် အံ့သြဖွယ် ကောင်းမွန်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မတော်တဆ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်တည် လာမည် မဟုတ်ပါ။
ဘုရားသခင်သည် လူသန်းပေါင်းများစွာကို ဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ သူသည် အာဒံဆိုသော တစ်ယောက်သော လူကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး အာဒံ အတွက် မိန်းမဧ၀ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အာဒံသည် လူသား မျိုးနွယ်၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ သူသည် အပြစ်လုပ်သောအခါ လူသား တစ်မျိုးနွယ်လုံးကို ဘုရားသခင်နှင့် ဝေးရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ဇာတိသဘောအရ လူသားသည် အပြစ်သားတစ်ဦးဖြစ်ရုံမက “ပုန်ကန်သူ” တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် သူ၏ဘ၀နှင့် သူ၏အစီအစဉ်များအား ဘုရားသခင်က ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို မလိုလားပါ။
ကျမ်းစာက လူဇာတိစိတ်သဘောထဲတွင် ဘုရားသခင်ကို မုန်းတီးမှုများရှိသည်ဟု ပြောပြထားသည်။ ဤကမ္ဘာ ပေါ်၌ ကြီးမြတ်သော ခေါင်းဆောင်များသည် လူသား၏အပြစ်နှင့်ပုန်ကန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြသနာများကို ဖြေရှင်းရန် စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်နိုင်ကြသော်လည်း ပြသနာများကိုမူ မဖြေရှင် နိုင်ကြပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ကိုဖြစ်စေ၊ အခြားလူများကိုဖြစ်စေ၊ လုံးဝ မကိုးစားသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကို ကိုးစားပါ က ခါးသီးစွာ စိတ်ပျက်မှုများနှင့် တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။ ကျမ်းစာက“လူသတ္တ၀ါကို အမှီပြု သောသူသည် ...ကျိန်အပ်သော သူ ဖြစ်၏”ဟုဆိုထားသည်။ ယေ ၁၇း၅
ကျွန်ုပ်တို့မူကား အသက်ရှင်သော ဘုရားကို ယုံကြည်ကိုးစားရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘယ်တော့မှ စိတ်ပျက်စေမည် မဟုတ်ပါ။ သူဂတိ ပေးထားသောအရာများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးရန် ပျက်ကွက်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျမ်းစာက ““ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားသောသူ၊ ထာဝရဘုရားကို မိမိကိုးစားရာ အကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည်၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံအပ်သောသူဖြစ်၏။””ဟုဆိုသည်။ ယေ ၁၇း၇
ဘုရားသခင်ကို သိခြင်းကြောင့် ကောင်းချီး အလွန်တရာ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ““ယာကုပ်၏အမျိုး၊ ဘုရားသခင် မစ တော်မူသော သူ မိမိဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို မြော်လင့်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ ထိုဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်တကွ အရပ်ရပ်၌ ရှိသမျှတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သစ္စာတော်ကို အစဉ်အမြဲ စောင့်တော်မူ၏။”” ဟုဆိုသည်။ (ဆာလံ ၁၄၆း၅-၆)
၁။ သမ္မာကျမ်းစာသည် .....
(က) သမိုင်းကာလတလျှောက်၌ လူသား၏တိုးတက်မှုများအကြောင်းကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) လူသား၏အပြစ်တွင် လုံးဝပျက်စီးလျက်ရှိခြင်းအကြောင်းနှင့် ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကြီးစွာသော
ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ အပြစ်နှင့်သေခြင်းသည် ဤလောကထဲသို့ ၀င်ရောက်လာသည်။
(က) ပထမလူအာဒံ၏ နာမခံခြင်းအားဖြင့်
(က) ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏အလိုတော်ကို ပုန်ကန်ခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းသင့်သလောက် မကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
၄။ အာဒံသည် ဘုရားသခင်ကို မနာခံသည်နှင့်တပြိုင်နက်...
(ခ) သူ၏၀ိညာဉ်ရေး၌ သေသွားသည်။
၅။ အာဒံမွေးဖွားသော သားသမီးများသည် ...
(က) ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ မွေးဖွားလာသည်။
(ခ) အာဒံ၏ပုံစံအတိုင်း မွေးဖွားလာသည်။
၆။ ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တော် (၁၀)ပါးကို လူတို့အား ပေးပြီးနောက် ....
(က) လူများ၏ စိတ်နှလုံးများအတွင်း၌ အပြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
(ခ) လူများသည် ပို၍ကောင်းလာကြသည်။
၇။ ခရစ်တော်ပြန်မကြွလာမီ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များ၌ ...
(က) အခြေအနေတို့သည် ယခုထက် သာ၍ကောင်းမွန်းသည်
(ခ) အခြေအနေတို့သည် နောဧအချိန်ကာလအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
၈။ အာဒံမိသားစု၏ ရာဇ၀င်တစ်ခုလုံးကို .....
(က) ပုံမှန်တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည့်ဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။
(ခ) အပြစ်ဆိုသောစကားလုံးတစ်ခုတည်းဖြင့် အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
၉။ ဘုရားသခင် အာဗြဟံကိုပေးသော ကတိတော်၌
(က) လူသားသည်အပြစ်သားဖြစ်သောကြောင့် လူသားကို ဖျက်ဆီးမည့်အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
(ခ) ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် ကြီးမားသောကြောင့် လူသားကို ကောင်းချီးပေးမည့်အ ကြောင်း